Dagaal beeleed ka dhacay Qardho iyo Taliyihii garoonka oo la dilay +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dagaal beeleed ka dhacay Qardho iyo Taliyihii garoonka oo la dilay +Cod
Ugu yaraan 3 Qof ayaa ku dhimatay kadib dagaal u dhaxeeyay labo maleeshiyo beeleed oo ku dagaallamay inta u dhaxeysa Magaalooyinka Qradho iyo Boosaaso ee Gobollada Bari iyo Karkaar.
Dadka dhintay ayaa kala ah Wiil iyo Gabar iyo Taliyihii Garoonka Diyaaradaha Magaalada Qardho ee Gobolka Karkaar,waxaana dagaalka uu u dhaxeeyay Labo maleeshiyo oo isku qabtay macdan laga baarayay halkaasi.
Ciidan uu watay Sarkaal horay uga tirsanaa Maamulka Puntland,Macdanna ka baaraya inta u dhaxeya Boosaaso iyo Qardho ayaa waxaa ay isku dhaceen Ciidan degaanka ah oo ka soo horjeestay in degaankooda laga baaro Macdanta,waxaana halkaas ku dhintay labo qof.
Taliyihii Garoonka Qardho ayaa isna ku dhintay shil kaas daba scday oo aano qabiil ahaa,waxaana Magaalada Qardho Xalay ku hoyday Madaxweynaha Puntland Cabdi Wali Max’ed Cali Gaas iypo Wafdi uu hoggaaminayo.
Taliyaha la dilay ayaa lagu magacaabayay Ismaaciil Weyrax,waxaan uu ku dhintay isaga oo difaacayay Gawaari ay rabeen in ay dhacaan qolo Maleeshiyo ah oo ka mid ah dhinacyada ku dagaallamay inta u dhaxeysa Qardho iyo Boosaaso.